Abakhiqizi bendandatho be-Alumina Ceramic ngokwezifiso Abavela e-China | I-XTL
Ikhaya > Imikhiqizo > I-Alumina Ceramic > Ingxenye ye-Alumina Ceramic
Izinguquko ezenziwe ngokwezifiso kububanzi be-alumina ceramic tube abakhiqizi abavela e-China | I-XTL
Ishubhu ye-Alumina Cone Ye-Pulp Cleaner ku-Paper Mill-XTL
Isingeniso se-ceramic grinder ikhofi yokugaya upelepele i-alumina ceramic XTL
Ingxenye ye-alumina ye-ceramic refractory yangokwezifiso
I-Alumina Ceramic Ring isetshenziswa ekwenziweni kwemishini, i-aerospace, amathuluzi anembayo, i-petrochemical, imithombo emisha yokukhanya, imishini yendwangu, izinto zikagesi, okokusebenza kwesiqandisi, amathuluzi okushisisa ngogesi, amathuluzi, imboni yamakhemikhali, ukuxhumana, ukuxhumana nezinye izimboni.
I-Alumina Ceramic Ring Properties:
Izinga lokushisa elishisayo lendandatho ye-alumina ceramic ingaba phezulu njenge-1650-1990 ℃. Ingenziwa ibe ingilazi encibilikisiwe esikhundleni se-platinum crucible, futhi ingasetshenziswa ukwenza amashubhu esibani ngokudluliswa kokukhanya kanye ne-alkali metal corrosion resistance.
Indandatho ye-alumina ceramic inamandla amahle kakhulu emishini, ukumelana nezinga lokushisa eliphakeme, ukumelana nokugqokwa, ukumelana nokugqwala, ukusebenza kahle kokufakwa kwezinto kanye nokuqina. Inezinzuzo zokuphila isikhathi eside, ukonga amandla, ukuvikelwa kwemvelo, ukuphepha, ukulawuleka nokunye.
Ngenxa yomsebenzi wayo omuhle kakhulu kagesi emazingeni aphezulu, indandatho ye-alumina ceramic inokulahlekelwa okuphansi kwe-dielectric, ukumelana nevolumu ephezulu, amandla aphezulu, ukuqina okuphezulu, i-coefficient encane yokunwetshwa komugqa, nokumelana okuhle kokugqoka nokumelana nokushisa. I-Alumina isetshenziswa kuma-95% wezikhathi zezomnotho ezijwayelekile. Kuphela ama-99% ～ 99.9% ama-alumina ceramics akhethelwe izidingo ezikhethekile zokusebenza.
Isicelo se I-Alumina Ceramic Ring :
I-Alumina Ceramic Ring isetshenziselwa ukukhiqizwa kwemishini, i-aerospace, izinsimbi ezinembile, i-petrochemical, imithombo emisha yokukhanya, imishini yendwangu, izinto zikagesi, imishini yesiqandisi, amathuluzi okushisa kagesi, izinsimbi, imboni yamakhemikhali, ukuxhumana, ukuxhumana nezinye izimboni.
Ukungalungi kwendandatho ye-alumina ceramic:
Ngokujwayelekile, i-elastic modulus inkulu impela, ubulukhuni buphezulu, i-brittleness inkulu, futhi ukuzwela kokuqhekeka kunamandla. Ngakho-ke, ubunzima bemishini bubonakala ikakhulukazi ebulukhuni bemishini kanye nokucutshungulwa kwe-brittleness. Ngokuvamile, i-microstructure ye-alumina ceramics iyizinhlamvu ezilinganayo, ezakhiwe nge-ionic bond noma isibopho esihlangene. Ngakho-ke, ukuqina kokuphuka kwe-alumina ceramics kuphansi. Ukucindezeleka kuzokwenza ubuso be-ceramic bukhiqize imifantu emihle, futhi imifantu izokhula ngokushesha futhi i-brittle fracture. Ngakho-ke, ekukhiqizeni indandatho ye-alumina ceramic ngokuvamile kwenzeka, okungukuthi, imifantu emincane ibonakala ebusweni be-ceramic.
Ukusebenza For Industrial Ceramic
Izici Zomzimba Ukuminyana ngobuningi g/cm3 2.7 3.6 3.6
Ukumuncwa kwamanzi % 0 0 0
Izimpawu Zemishini Amandla e-Flexural Mpa 145 320 340
Ubulukhuni Vickers I-Gpa 5.7 12.2 13.5
I-Elastic module I-Gpa 120 280 320
Isilinganiso sikaPoisson - 0.21 0.22 0.23
Izici Zokushisa Umugqa wokunweba i-coefficient (20-5000C) 10-6/℃ 7.9 7.1 7.2
Ukushisa Okuthize *10-3J/(kg*K) 0.75 0.78 0.78
Izici zikagesi I-Dielectric constant (1MHZ) - 6.2 9 9.4
I-Dielectric loss angle *10-4 18 15 5
Ifilosofi: Ngekhwalithi enhle kakhulu, isevisi yesigaba sokuqala, ibhizinisi elithembekile
Iqembu: Sinethimba lethu elethu ukucwaninga, ukuklama, ukukhiqiza nokudayisa.
Izitifiketi kanye Namalungelo Obunikazi
Ungakwazi ukunikeza amasampuli amahhala?
Inkampani Liling Xing Tai Long Special Ceramic Co., Ltd
Ingxenye yochwepheshe ye-alumina ceramic ikhiqizwa e-china
Isevisi yemboni yeminyaka engaphezu kwe-13
Sisebenze namakhasimende amaningi angaphandle
Indandatho eyenziwe ngokwezifiso ye-Alumina ceramic Indandatho ye-alumina ceramic
Izinguquko zobubanzi beshubhu ye-alumina ceramic uma iqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa mayelana nokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi ijabulela idumela elihle emakethe.I-XTL ifingqa kafushane ukukhubazeka kwemikhiqizo edlule, futhi ngokuqhubekayo kuyabathuthukisa. Ukucaciswa kwezinguquko kububanzi beshubhu ye-alumina ceramic kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho.
Izitsha ze-alumina ziyi-ceramic yobuchwepheshe ngenxa yezakhiwo zazo kanye nenani lesilinganiso sokusebenza. Ukuhlukaniswa kwe-alumina ceramics kusekelwe kokuqukethwe kwe-alumina, okungahluka kusuka ku-70% kuya ku-99.9%. Uma kuphakeme ukuhlanzeka kwe-alumina, kunamandla ukuguga nokugqwala kwayo.
Lo mkhiqizo osetshenziswa kumshini wokugaya usawoti/upelepele, onokumelana nokugqwala okuhle, izici ezinhle zemishini, ukumelana nokugqoka okuphezulu, ubulukhuni obuphezulu, ukudla okunomsoco.
I-Alumina Ceramic Parts ibonisa ubulukhuni obuphezulu nokumelana nokuguga, amazinga aphansi okuguguleka, ukumelana nezinga lokushisa eliphezulu, ukumelana nokugqwala, kanye ne-bioinertness. Ukwengeza, izakhiwo zayo eziphakeme ze-dielectric zinenzuzo emikhiqizweni ye-elekthronikhi.
Inkampani Engcono Kakhulu Yokukhiqiza Isithando Sokungenisa Ubumba I-Crucible Crucible Manufacturers - XTL
Isithando somlilo esincibilikisa i-Clay Graphite Crucible Manufacturers uma siqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, sinezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi ijabulela idumela elihle emakethe. I-Xngtailong ifingqa iziphambeko zemikhiqizo edlule futhi iqhubeka ikuthuthukisa. Imininingwane ye-Induction furnace encibilika iClay Graphite Crucible Manufacturers ingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho.Ama-graphite crucibles asetshenziswa kakhulu ekuncibilikisweni kwezinsimbi zamathuluzi e-alloy, izinsimbi ezingezona ayoni, nama-alloys azo kwezensimbi, ezisansimbi, emishinini, ngamakhemikhali, nakweminye imikhakha yezimboni, futhi zinemiphumela emihle yobuchwepheshe nezomnotho.